Zim, China to work on reinforcing global trade — News For Finance
September 3, 2021 13
Zimbabwe will work with China and the rest of the world to foster an open and inclusive economic environment as its contribution to strengthen global trade and facilitate world economic recovery, President Mnangagwa told the virtual summit at the 2021 China International Fair For Trade in Services on Thursday.
This meant Zimbabwe would continue to create an enabling environment for innovation, increased production and productivity, entrepreneurship, job creation, access to new markets and new technologies.
“I also wish to appreciate the excellent bilateral relations between Zimbabwe and China under our comprehensive strategic partnership framework. Zimbabwe is dedicated to working, with China and indeed the rest of the world, to foster an open and inclusive environment for socio- economic cooperation. Zimbabwe had many areas of…
Read full article here: www.herald.co.zw